नेकपाबाट काँग्रेसमा प्रवेश गर्नेको लर्को , हेर्नुहोस यस्तो छ सुची !::Digital News Paper
नेकपाबाट काँग्रेसमा प्रवेश गर्नेको लर्को , हेर्नुहोस यस्तो छ सुची !
प्रकाशित मिति :शुक्रबार, मंसिर ७, २०७५ Friday, November 23rd, 2018
धनगढी– नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाको क्रेज दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। यसको पछिल्लो उदाहरण देखिएको छ कैलालीको लम्कीमा। पछिल्लो समय देश दौडाहमा रहेका गगन कञ्चनपुरमा निर्मला पन्तका आमाबुवा भेट्दै विहीवार कैलाली आइपुगे। विहान सदरमुकाम धनगढीमा पत्रकार सम्मेलनपछि चुहा नगरपालिका १ लम्कीमा कांग्रेस नगरसमितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भए। गगन आउने थाहा पाएर सयौ व्यक्ति उनलाई हेर्न कार्यक्रम स्थल आइपुगे। त्यतिमात्रै होइन आएका मध्ये अधिकांश तत्कालै पार्टी प्रवेश गर्ने निर्णयमा समेत पुगे। हो विहीवारको कार्यक्रममा गगनले विभिन्न पार्टीका नेतासहित सयौं कार्यकर्तालाई माला लगाएर स्वागत गर्दै पार्टी प्रवेश गराए।
प्रवेश गर्नेमा विवेकशील साझदेखि नेकपाका नेतासम्म
विहीवारको कार्यक्रममा गगनको हातबाट टिका र मालासहित पार्टी प्रवेश गर्नेमा रवीन्द्र मिश्रको विवेकशील साझा पार्टीदेखि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता छन्।
विवेकशील साझाका नेता टेकराज कठायत र तत्कालिन अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका नेता भीम बहादुर भण्डारीको नेतृत्वमा पार्टी प्रवेश गरेका नेता कार्यकर्तालाई गगनले न्यानो स्वागत गरेका हुन स्वागतपछि आफ्नो मन्तव्य राख्दै नेता थापाले वर्तमान सरकारले जनतालाई समृद्धि दिननसक्ने ठोकुवा गरे। उनले सरकारलाई झक्झक्याउन प्रतिपक्षी सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुन नसकेको भन्दै पार्टी नेतृत्वको आलोचना समेत गरे।
सरकार र प्रतिपक्षीमा परिपक्व नेतृत्व नभएकाले देश विकासको बाटोमा जान नसकेको भन्दै पार्टी सुधार्नुपर्ने बेला आएकोमा जोड दिए। प्रधानमन्त्री अलमलिदा सरकार अस्तव्यस्त भएजस्तै कांग्रेसमा पनि त्यस्तै समस्या देखिएको भन्दै उनले नेतृत्व सुधारको आवश्यकता औल्याए। सरकारका गलत कदमविरुद्ध खबरदारी गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।